Put it On: Fifaninanana ho an’ireo mpamokatra sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2009 6:37 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Português, македонски, Français, عربي, Italiano, Español, polski, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Andoavambola ity andiany ity. Put it On Ankalazao dia manandratra ireo mpamokatra sarimihetsika izay miasa any amina faritra ara-jeografika samihafa sy fiteny samihafa ihany koa ho fantatra manerana izao tontolo izao..
Efa mba nanonofy foana ny hianatra any amin’ny New York Film Academy ve ianao? Ity no sehatra iray ahafahanao manatanteraka izany, tsy mijery velively hoe aiza ianao no mipetraka, na ihany koa hoe aiza ianao no miasa sy manatontosa sarimihetsika. . Ny fifaninanana Put it On Picture Show dia mety hahazoana vatsim-pianaranana hianatra any amin’ny New York Film Academy ary ihany koa loka mitentina 5000 dollars amerikanina, na ho an’ny court métrage tsara indrindra, na ho an’ny long métrage tsara indrindra, ary koa ho an’ny mpaneho an-tsehatra [interpretation] mendrika indrindra . Ny loka faharoa amin’ny sokajin'ny long métrage sy court métrage tsara indrindra dia caméra numérique HD Prosumer iray.
Ho fanampim-panazavana mahakasika ny fifaninana , dia tsidiho ny tranonkala Put it On. Ny fifaninana dia nisokatra tamin'ny 30 Jolay ary ny fara-fisoratana anarana dia ny 26 Novembra ho avy izao. Ny folo voalohany amin’ny courts sy longs métrages dia safidina ao amin'ny aterineto. Ny mpitsara ahitana an'ireo avy ao amin’ny New York Film Academy ary Max Fraser, anisan’ ireo namorona ny Put it On no hilaza amin'ny 7 Janoary 2010 izao izay mpandresy. Ireo izay mpaneho an-tsehatra nahavita ny tsara indrindra dia hotsongain'ny mpitsara manokana avy ao amin'ny lisitra fandraisana anjara rehetra.